Fanangonana Spawn | Reef Resilience
Ny fanangonana spawn avy any an-tsaha dia mety indrindra amin'ny haran-dranomasina izay miteraka amin'ny alàlan'ny fiterahana. Noho izany, ny fahalalana ny mponina haran-dranomasina eo an-toerana sy ny biolojian'ny fiterahana dia tokony ho faritana alohan'ny hanombohan'ny fanangonana. Ny famaritana izay karazana haran-dranomasina izay hividiananao olitra alohan'ny fanangonana dia hanampy amin'ny fiantohana fahombiazana bebe kokoa satria hamela anao hamaritra ny fotoanan'ny tranga fiterahana.
Ampifandraiso amin'ny tranombakelan'ny vatoharan-dranomamy elkhorn izay andrasana hamokarana harato. Sary © Paul Selvaggio / SECORE International
Safidio ny karazan-tsakafo ho an'ny kolotsaina Larval
Ny isan'ny ray aman-dreny salama dia lakilen'ny fahombiazana ary ny zanatany lehibe kokoa dia hamokatra gamety betsaka kokoa. Ho fanangonana, tokony ho 5-10 zanatany salama amin'ny haben'ny fiterahana no tokony hapetraka ao amin'ny tranonkala iray izay azo atao amin'ny filentika amin'ny alina. Ho an'ny ankamaroan'ny karazana dia zanatany 30 sm ny savaivony na lehibe kokoa dia hiteraka, na dia zanatany sasany manana savaivo 20-30 cm aza dia mety hiteraka ihany koa.
Ho an'ny karazan-karazan-javamaniry sasany amin'ny morphologies manodina na lobedô (toy ny Acropora, Pocilliopora, Orbicella), ny fanaparitahana matetika dia mety hanome ny isan'ny ray aman-dreny izay tena clonal (na mitovy amin'ny génétique) any amin'ny toerana sasany. Ny gametes avy amin'ny zanatanin'ny ray aman-dreny roa izay mitovy klone dia tsy ho zezika, noho izany ny fanangonana gamet avy amin'ny mponina marobe klonal dia mety hamoa ny tahan'ny zezika ambany. Noho izany antony izany, ny fahalalana ny firafitry ny klonal dia manampy, fa raha tsy misy kosa dia fadio ny manao ny fanangonana rehetra avy amin'ny 'ala mikitroka' na zanaky ny rantsam-pokontany mifangaroharo satria ireny dia azo inoana kokoa ho klone. Raha misy ny ahiahy momba ny fanjakan'ny kolontsaina avo lenta, dia azo angonina gametes sy afangaro amin'ireo zanatany izay manana halavirana 10 m farafahakeliny na avy amin'ireo tranokala akaiky raha mamela ny loharano logistika.
Famaritana ny fandoroana kora
Raha vantany vao fantatra ny toerana fanangonana sy ny karazana haran-dranomasina kendrena, ny dingana manaraka dia ny mamaritra hoe rahoviana no hitranga ny fiterahana. Ny zava-dehibe dia matetika ny fotoana fananahana no tsy mitovy amin'ny karazana haran-dranomasina sy ny faritra, noho izany ny fampiasana tabilao mialoha na fahalalana eo an-toerana amin'ny toerana misy anao dia afaka manampy amin'ny faminavina tsara kokoa ny fanaovana fananahana. Ny ankamaroan'ny spawners fampielezam-peo dia mamoaka gamet amin'ny alina, na dia miteraka aza ny sasany alohan'ny filentehan'ny masoandro, ary ny ankamaroan'ny fiterahana dia mandeha amin'ny fandaharam-potoana somary azo vinavinaina. Ny faminaniana eo an-toerana dia matetika ataon'ny manam-pahaizana ary azo idirana amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Spawning Research Group.
Misy antony maromaro izay mitaona ny fotoana hitrangan'ny fananahana haran-dranomasina. Voalohany, ny tahan'ny fiakaran'ny maripanan'ny ranomasina dia mamaritra ny volana rehefa miteraka ny haran-dranomasina. Any Karaiba, midika izany fa ny ankamaroan'ireo karazana haran-dranomasina dia miteraka mandritra ny volana mafana eo anelanelan'ny Aogositra sy Oktobra. Faharoa, ny tsingerin'ny volana dia mamaritra ny andro izay niterahan'ny vato harana. Ohatra, ny ankamaroan'ny karazana haran-dranomasina dia miteraka mandritra ny 2-3 andro aorian'ny volana fenomanana. Farany, ny ora filentehan'ny masoandro dia mamaritra ny fotoana nitrangan'ny haran-dranomasina, izay matetika mitranga 30 minitra - 2 ora aorian'ny filentehan'ny masoandro. Ny toro-hevitra amin'ny faminaniana ny fiterahana haran-dranomasina dia hita ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKarazan-tsakafo Karaiba ary ny tabilao momba ny faminaniana etsy ambany novolavolain'ny Coral Restauration Consortium's misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampielezan-kevitr'i Larval Propagation.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandinihan-tsofina momba ny Corolla tany Karaibamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKarazan-tsarimihetsik'i Karaiba Karaibamanokatra fisie PDF
Raha toa ka mitranga matetika amin'ny fanangonam-bokatra ny haran-kovitra, amin'ny ankapobeny, dia tokony amporisihina fa ny olon-drehetra dia mahafantatra tsara ny habaka amin'ny fampisehoana orita mandritra ny andro maromaro mba hamantarana na hametrahana mari-pamantarana tsy maharitra. Ankoatra izany, ny endriky ny sarimihetsika hita maso amin'ny alina (toy ny onjam-panafody, ny sainam-pandrefesana, na ny jiro mirehitra) dia manamarika ny toerana misy ny vatohara maneran-tany izay misy ireo zanatany ray aman-dreny, fa tsy ny zanatany tsirairay fa ny fahazavana dia afaka manintona biby mpiremby. Ny divay dia tokony homanina amin'ny fitaovana famoriam-bola, indrindra fa ireo mpanangona lay miaraka amin'ny fitaovana fisakafoana sy ireo lamba fanampiny. Ny fitaovam-pamokarana dia voatanisa ao amin'ny lisitry ny fivarotana Larval Propagation etsy ambany Karazan-tsakafo Karaiba.
Nipongatra ny gametan'ny vatohara elkhorn izay nipoitra tao amin'ny kaopy fanangonana napetraka teo afovoan'ny tranombarotra iray. Sary © Paul Selvaggio / SECORE International
Ho an'ny karazana hermaphroditika, ny endriky ny loko mavokely amin'ny vavan'ny polyp, antsoina toerana, dia fambara hita maso fa efa niomana hiteraka ny zanatany ary tonga ny fotoana hametrahana mpamory lay amin'ny zanatany. Ny famoahana ireo fonosana dia matetika mitranga ao anatin'ny 10-30 minitra aorian'ny fipoahana ao am-bava polyp. Ho an'ny spawners gonochoric, ny syringes lehibe no fomba mahazatra indrindra hanangonana gametes in situ ary tokony hangonina haingana araka izay azo atao alohan'ny hidirana ao amin'ny ranom-boasary ny gamety ary tsy hita intsony.
Rehefa mivoaka ny fehezam-boninkazo, dia atody mitsingevana ao anaty siny fanangonana ireo atody maniry. Tokony hosakanana ny siny mpanangona raha feno 25% eo ho eo, na ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 20 minitra aorian'ny fanombohana, mba hialana amin'ny gametes tsy ho levona, very ao amin'ny tsanganana rano, na tsy fahampian'ny kalitaon'ny rano ao anaty siny. Siny vaovao azo soloina amin'ny mpanangona raha mbola miteraka ny zanatany. Ny siny gamety dia tokony haverina amin'ny sambo na amoron-tsiraka hanohizana ny dingam-pahafatesana.
Ny fanaraha-maso rehefa mipoitra eo amin'ny toerana misy anao dia mety hanampy anao hanatsara kokoa ny faminanianao ny taona manaraka. misokatra amin'ny varavarankely vaovaokitiho etomanokatra fisie EXCEL hoan'ny Fanaraha-maso ny fanaraha-mason'ny vatohara novolavolain'ny CRC Larval Propagation Working Group.
Fantaro hoe rahoviana sy aiza no hijerena ny tsy fahampian-tsakafo - tena ilaina ny fandaharam-potoana hanomanana ny fantsona sy ny fakana ny gamet.
Miomàna - Ny dingam-pandeha sy ny sambokely alina dia mitaky drafitra sy traikefa fanampiny.
Ny karazam-bozaka sy lobed dia mety manana klonaly ambony maro ao amin'ny tranokala iray izay tsy mba miangona, ka mampifangaro gametes avy amin'ireo zanatany 10 m na misy toerana hafa mety ilaina.
Io votoaty io dia novolavolain'ny SECORE International. Ho fampahalalana bebe kokoa, mifandray misokatra amin'ny varavarankely vaovaoinfo@secore.org na mitsidika ny tranokalany amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaosecore.org.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLarval Propagation Shopping Listmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana fanaraha-maso ny Coral Spawningmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Spawning Research Group
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFlower Garden Banks Nasionalin'ny Fiangonan'ny Nosy Coral
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSECORE Video - Fitaovana fanangonana Nets
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFIZARANA SECORE - Fivoarana fanangonana bozaka